Faka iSpotify ku-Ubuntu kunye neziphumo | Ubunlog
Spotify uye waba Enye yeenkonzo zomculo ezidumileyo, Akukho mathandabuzo. Enkosi kwisixa esikhulu sentengiso esisungulwe yinkonzo kumajelo eendaba ohlukeneyo kunye nezivumelwano athe wakwazi ukuzenza nezinye iinkampani.
Kwakhona kwelinye icala yinkxaso athe umdlali wayinikwa kumaqonga awahlukeneyo ezinje ngezixhobo eziphathwayo, kunye neenkqubo zokusebenza. Kwinkqubo yethu ethandekayo yoBuntu sinomthengi osemthethweni weSpotify ke akuyomfuneko ukuba ubhenele kubathengi besithathu.
Kule nto singayonwabela inkonzo esiyinikwa nguSpotify, ethi ukuba unayo iakhawunti yasimahla unethuba lokumamela umculo wakho, kodwa ngenxa yokuthengisa kwintengiso.
Kwakhona ixesha nexesha uya kuva izibhengezo, awuyi kuba nakho ukukhuphela umculo kunye nokwenza eminye imisebenzi eyongezelelweyo.
Kwelinye icala, kukho inkonzo yeprimiyamu ethi isuswe le miqobo ikhankanywe apha ngasentla, ukongeza kwinto yokuba ungalawula umdlali kwesinye isixhobo, oko kukuthi, ulawulo olukude ngamagama ambalwa.
Kulungiselelwe abo bangayaziyo inkonzo Ngendlela emfutshane, ndingakuxelela ukuba iSpotify yinkqubo yeplatform, njengoko benditshilo ngaphambili, inokusetyenziswa kwiWindows, Linux nakwiMAC, nakwi-Android nakwi-iOS.
Kuyo ungonwabela ukumamela umculo kuphela kwemfuneko yokuba noxhumano lwe-Intanethi, Inikezwe ngohlobo lwenkonzo eyiyo.
Inerepertoire enkulu yamagcisa kunye neerekhodi onokuzifumana ukuba uzimamele.
Ukongeza apho isicelo sisebenza njengonxibelelwano lwasentlalweni, apho unokulandela khona amagcisa akho owathandayo kwaye unokwaziswa ngokukhutshwa okutsha, kunye neziganeko ezikufutshane nawe.
Ukuyifaka kwinkqubo yethu sinokukhetha ezimbini.
1 Uyifaka njani i-Spotify kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
2 Uyikhupha njani iSpotify kwinkqubo?
Uyifaka njani i-Spotify kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Ukufakwa kweSpotify kwinkqubo yethu, Kuya kufuneka sivule i-terminal kwaye senze le miyalelo ilandelayo, kufuneka kuqala songeze indawo yokugcina kwinkqubo:
Emva koko siqhubeka nokungenisa amaqhosha:
Sihlaziya indawo yokugcina:
Kwaye ekugqibeleni sifaka kunye:
Enye indlela yofakelo yeyona icetyiswayoUkusukela ngoku abaphuhlisi beSpotify abajongene nokubonelela ngenkxaso yeLinux baya kugxila koku.
Indlela kungenxa yephakheji ye-snap, Ukongeza ukonwabela zonke izibonelelo zokusebenzisa olu hlobo lwepakeji kwinkqubo.
Ukuba usebenzisa Ubuntu 14.04 kufuneka ufake inkxaso ye-Snap ngalo myalelo ulandelayo:
Sifaka iSpotify nge:
Solo Kuya kufuneka silinde ukuba iphakheji ikhutshelwe kwaye ifakwe kwinkquboIxesha loku liya kuxhomekeka kunxibelelwano lwakho lwe-Intanethi, kuba inkqubo inobunzima obungaphezulu kwe-170mb.
Nje ukuba ukufakela kwenziwe, kufuneka sijonge usetyenziso kwimenyu yethu kwaye siqhube umxhasi weSpotify. Nje ukuba umthengi avule, baya kuba nakho ukungena kuyo okanye ukuba abanayo iakhawunti kumthengi ofanayo, banokwenza enye.
Apha sele uza kukhetha ukuba simahla okanye siza kuhlawulwa ukonwabela iinkonzo zepremiyamu.
Ungajonga ezinye zonyuselo ezihlala zineSpotify apho zikunika inyanga enye okanye ezimbini zepremiyamu ngexabiso okanye ezimbini zepremiyamu ngexabiso elifikelelekayo, apha eMexico kungaphantsi kwedola.
Ngoku ukuba awufuni ukwenza naluphi na ufakelo kwinkqubo yakho ungasebenzisa inkonzo kwisikhangeli sakho, kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi esemthethweni yeSpotify kwaye emazantsi siza kubona ukhetho oluthi umdlali wewebhu ucofe apho kwaye iya kuthunyelwa kwi-url ye-Spotify web player.
Uyikhupha njani iSpotify kwinkqubo?
Okokugqibela, ukuba uthathe isigqibo sokuyikhipha inkonzo, ngaso nasiphi na isizathu kufuneka sivule i-terminal kwaye senze lo myalelo ulandelayo.
Ukuba ufake kwi-Snap:
Ukuba ufakelo lwalugcinwe:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » isiNxulumanisi » Faka iSpotify ku-Ubuntu nakwiziphumo
Enkosi kakhulu ngoncedo lwakho, andikhange ndisebenzise ipakethe ye-snap kwaye ibisebenza okokuqala.
Phendula kwi kekepascual
Ukuba kufundiso ngalunye okanye kungeniso olugwetyelwe ugoogle ngenxa yokungasebenzi okanye ukungalunganga. Ubunlog ungaya kwi-m ...
Andiyithandi indawo yokubulela enkosi